Izinga lolwandle likhuphuka ngokushesha kunokucabanga kwangaphambilini | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinga lolwandle likhuphuka ngokushesha kunalokho obekucatshangwa ngaphambili
Ukukhuphuka kolwandle kungenye yemiphumela ekhathaza kakhulu ukufudumala kwembulunga yonke. Izigidi zabantu zihlala ngasogwini naseziqhingini eziphansi, ngakho-ke uma kungathathwa zinyathelo, ngokungangabazeki kuzoba nokufuduka okukhulu emashumini ambalwa eminyaka edlule.
Kuze kube manje bekucatshangwa ukuthi izinga elijwayelekile lolwandle lenyuka ngesilinganiso esingu-1,3-2mm ngonyaka; Noma kunjalo, ucwaningo olusha lukhombisile ukuthi lukhuphuka ngokushesha okukhulu.
Phakathi nekhulu leminyaka elidlule ulwazi ososayensi abalutholile ngokukhuphuka kwezinga lolwandle luqhamuke kwinethiwekhi yama-gauge gauges ezitholakala ngasogwini. Lezi zinsimbi ziwusizo olukhulu uma ufuna ukwazi ukuthi kukhule kangakanani kulezi zindawo, kodwa ngeke bakunikeze umphumela jikelele njengoba zizonqunywa, njengoba kuchaziwe ngumbhali oholayo wocwaningo uSönke Dangendorf, ngokunyakaza komhlaba okuqondile mpo koqweqwe lomhlaba nangamaphethini okuhlukahluka kwesifunda okubangelwa izinguquko ekujikelezweni kolwandle, ukwabiwa kabusha komoya noma imiphumela amandla adonsela phansi okwabiwa kabusha kwenqwaba yamanzi neqhwa eMhlabeni.
Manje, ososayensi banama-altimeter okuthi, kuma-satellite, aqaphe amazinga olwandle kuzo zonke izilwandle.
Ngakho-ke, ukuthola kahle ukuthi ulwandle lukhuphuke ngokushesha kangakanani kusukela ngekhulu lama-XNUMX, abakwenzile kwaba khetha amarekhodi aphezulu kakhulu futhi asezingeni eliphakeme, bese ulungisa zonke lezo zinto ezinganikeza imiphumela eyiphutha bese uthatha isilinganiso somhlaba jikelele. Ngale ndlela, bakwazile ukuthola ukuthi kuze kube ngaphambi kuka-1990 izinga lolwandle lase likhuphuke ngo-1,1mm ngonyaka, kodwa kusukela ngawo-1970 selikhuphuke kakhulu ngenxa yomthelela wabantu emvelweni.
Ngokukhuphuka kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba, ukuncibilika kwezigxobo kwenza ukuba ogwini kunciphe futhi kungavikeleki.
Ungafunda isifundo esigcwele lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinga lolwandle likhuphuka ngokushesha kunalokho obekucatshangwa ngaphambili
Sinjani isimo sezulu ogwadule